ऊ, म अनि हाम्रो अनिर्मित सम्बन्ध | मझेरी डट कम
lonelybikash — Sat, 06/30/2012 - 16:01
“सरी … सरी म आउन अलिक ढिलो भयो … ।”
“साले तँ जहिले यस्तै गर्छस् । म कतिबेर भयो तलाई यहाँ कुरेको, थाहा छ त कुकुरलाई?”
“अनि सरी भने त मैले । म त्यस्तै परेर आउँदा आउँदै ढिलो भयो के … । नरिसा न । जाऊ अब फेरी टिकट पाइदैन ।”
अहिले ऊ कहाँ छे मलाई थाहाँ छैन तर ऊसँग बिताएका स-साना क्षणहरू मेरो स्मृतिपटमा घुमिरहन्छ । अनि म त्यसै एकल मौन हासो मुस्कुराउन पुग्छु … पागलसरी । कति निकट अनि प्रगाढ सम्बन्ध थियो उसको र मेरो । ऊ उमेर पुगेकी केटी र म केटा तर पनि हाम्रो मित्रताले अन्य रुप लिन सकेन । मैत्री सम्बन्धको चरम सीमामै बाधिरह्यौ हामी । परिचयको सुरुका दिनहरूभन्दा पछि उसले मलाई ‘तपाई’ या ‘तिमी’ भनेर बोलाइन न त मैले नै ‘तिमी’ सम्बोधन गरे । जहिले पनि ‘तँ’ शब्दले सम्बोधित भयौ हामीहरू एकापसमा । ‘तँ’ शब्द … एउटा हेयकर र तुच्छ मानिने शब्द तर कति आत्मीयता बढ्छ ‘तँ’ सम्बोधनको व्यवहारिक भोगाइमा, त्यसको राम्रो अनुभूत गराएकी थिई उसले मलाई । हाल ऊ कहाँ र कुन अवस्थामा छे, त्यो त मलाई थाहाँ छैन तर ऊसँग बिताएका अनेकन पलहरू जसमा हामी साथै थियौ, ती सब ताजा छन् मस्तिष्कमा । त्यसैले त म ऊसँगै भएको भ्रममा पर्छु र नजानिदो पाराले मौन मुस्कान छर्दछु । कसले देख्छ मेरो यस्तो सुखदाभासको प्रस्तुति? अह! कसैले देख्नम सक्दैन बस म पागल साबित गरिदिन्छु आफैले आफैलाई । तर यसरी पागल बन्न पनि म औधी मन पराउछु किनकि म ऊद्वारा पागल बनेको हुन्छु ।
मलाई याद छ ती हाम्रा परिचयका प्रारम्भिक दिनहरू । म प्राय एकान्तमा बस्ने, आवश्यकता भन्दा बढि बोल्न नरुचाउने, सजिलै अरुसँग घुलमिल हुन नसक्ने जङ्गली स्वभावको । ऊ ठिक्क मेरो विपरित । बोलिरहने, सबैलाई रिझाउन सक्ने, सुमधुर सम्बन्ध राख्ने, मित्रवत् व्यवहार बढाउने ज्यादै शील स्वभावकी । आकाश-पातालको फरक थियो हाम्रो स्वभावमा । त्यस्तैमा एकदिन ऊसँग बोल्नुपर्ने भयो कारणवश । मैले ‘एक्सक्युज मि’ भन्दा उसले ‘हजुर’ भनि प्रतिक्रिया दिएकी थिई । मलाई त्यति भन्न साह्रै असहज लागेको थियो झन् उसको ‘हजुर’ शब्दको सरल जवाफ सुन्दा शायद मेरो अनुहारको रङ्ग उडेको थियो, जुन मैले देख्न सक्ने कुरै भएन तर मलाई साह्रै अप्ठ्यारो महशुस भएको थियो त्यसबेला । उसको नाम त मलाई पहिल्यै देखि थाहाँ थियो किनकि अरुले उसलाई नाम काढेर बोलाएको धेरै पटक नचाहेरै पनि सुनेको थिए र मेरो पनि उसलाई । त्यसैले परिचयको संवाद त्यहि ‘एक्सक्युज मि’ र ‘हजुर’ शब्द थियो । म आजसम्म पनि यी दुई शब्दलाई ज्यादै महत्त्वका साथ लिने गर्दछु ।
त्यसपछिका दिनहरूमा अरुसँग खुलेर नबोलेपनि ऊसँग अलि धेरै बोल्ने भएछु म । शायद उसको व्यक्तित्त्व र स्वाभावले प्रभावित भएर होला ममा केहि परिवर्तन आएको । आफ्नो बदलिदोपना देखि कहिलेकाही त आफैलाई लज्जाबोध हुने गर्थ्यो तर पनि म क्रमिकरुपमा बदलिन चाहे । उसमा या उसको मित्रतामा नदेखिने आकर्षण थियो त्यसैले त मेरो बानी फेरियो । स्वभाव फेरियो । कतिपय जानकार कुराहरूमा म जानीजानी अबुझ रहन खोज्थे ताकि त्यो अनभिज्ञतालाई उसले मेरो आँखासामु रहेर प्रष्ट्या इरहोस् । मलाई उसले हात हल्लाएर मुहारलाई अनेक आकृतिमा ढालेर कुरा गर्ने शैली साह्रै प्रिय लाग्थ्यो । म एकतमासरुपले ऊ बोलेको हेरिरहन्थे तर उसका सबै कुराहरू मैले सुनेको हुदिनथिए ।
हामी प्राय: दिनभर साथै रहन्थ्यौ र केही न केही कुरामा छलफल चल्थ्यो । म सधैजसो उसलाई बोल्ने मौका दिन्थे र बुझेको कुरामा पनि अन्यौलता दर्शाइदिन्थे । उसले मेरो नियत नबुझेर हुन सक्छ बेला बेलामा रिसाइदिन्थी तर त्यो क्रोधको पछाडि ठुलो कारण हुदैन थियो । उसको व्यक्तित्त्व र प्रस्तुतिकरण नै त्यति आकर्षक थियो जसमा म मोहित भए त मेरो के दोष? उसलाई एउटै कुरा बारम्बार सम्झाइरहन शायद दिक्क पनि लाग्थ्यो होला र त रिसाउथी । म लाटो त्यति बुझ्दैनथिए र ऊ रिसाएकोम विचलित हुने गर्थे, दिमागलाई तनाव दिन्थे अनेक सोचेर । पछि ऊ आफै बोल्न आउथी र भन्ने गर्थी “आफ्नो प्रिय अनि स्वामित्त्वको चिजवस्तुमा अधिकार जताउन खोज्दोरहेछ मन ।” म अझै उसको रिसको माध्यम बन्न चाहन्छु र पीडामा पिल्सिनुको आनन्द भोग्न चाहन्छु । तर ऊ आज मसँग छैन र कहाँ छे त्यो पनि जान्दिन ।
उसको समीप रहन मलाई मन पर्थ्यो । हामी कहिले मन्दिर त कहिले सिनेमा हल जान्थ्यौ । मलाई चलचित्रमा खासै रूची नरहे पनि ऊसँग गइदिन्थे सिनेमाहल । ऊसँग नजिक रहन पाउँदा बेग्लै किसिमको आनन्द लाग्थ्यो । उसलाई कस्तो आभास हुने गर्थ्यो मलाई थाहाँ थिएन र जान्ने साहस पनि गरिन । म प्राय: एक्लै टोलाइरहन्थे । कतिपय मेरा टोलाइका क्षणहरूमा ऊ काल्पनिक सहयात्री हुने गर्थी र मलाई मेरो यस्तै पागलरुपी स्वभाव पनि आनन्दमय लाग्थ्यो । एकसमय म एकान्तमा उसकै कल्पनामा हराइरहेको थिए । त्यो अवास्तविकतामा घेरिएको दृश्य र मेरो मनस्थितिमा कोरिदै गरेको सुन्दररुपी तस्विरहरू सब अर्थहिन थिए । यथार्थ भन्दा धेरै परका धमिला सपनाहरू मात्र थिए । तर पनि ती तमाम अमूर्त चित्रहरू उतार्दै, केहि सम्भाव्यता अँगालेका दृश्यहरू कल्पिदै झूटो आनन्द मनाइरहेको समय उसले अनायासै पछाडिबाट जोडले टाउकोमा हिर्काएकी थिई । मलाई केहि पीडाबोध भयो र तर्सिएपनि । मैले ख्यालै नगरी उसलाई जोडले हात फर्काए र पछि उसलाई फकाउन ज्यादै मुश्किल परेको थियो मलाई । पछि फेरी राम्रै सम्बन्धमा गाँसियौ हामीहरू, हाम्रो पढाइ पनि सकियो । म आफ्नै कामले केहि समयको लागि बाहिर गए । पछि फर्किदा उसलाई भेट्न सकिन । सोधखोज नगरेको होइन तर मेरो प्रयास व्यर्थ भयो । ऊ हराई मबाट अनि हाम्रो बन्दै गरेको सम्बन्ध पनि हराउन बाध्य भयो ।
आजका दिनहरूमा सोच्ने गर्छु हाम्रो सम्बन्धले कस्तो अर्थ बोकेको थियो? उसको निम्ति म को थिए र ऊ मेरो के थिई? शायद हामीले मित्रताको परिधिलाई केहि हदसम्म नाघेका थियौ र नयाँ सम्बन्धमा रमाउने चाह थियो हाम्रो मनमा, जुन कुरा हामी दुबैले बुझन सकेनौ । त्यति बिघ्न आकर्षण र स्नेह शायद प्रेममा मात्र सीमित हुने गर्दछ । हाम्रो अपरिभाषित सम्बन्धको अर्थ उसलाई बुझाउन सक्ने क्षमता आज मसँग छ । सम्बन्ध प्रष्ट्याबउने चाहना छ, लाग्छ ऊ पनि बुझ्न तयार छे तर विडम्बना आज उसलाई भेट्ने उपायहरू सबै समाप्त भइसक्यो ।
जनता ब्युँझाउँने कवि लेखबहादुरको स्तुत्य–अभियान
कल्कि अवतार (लघुकथा)
विरहमा मन मुटु जलेको छ आज